Khaladaadka Horumarinta Mawduuca Wadaagga ah ee WordPress | Martech Zone
Sabtida, Juun 28, 2014 Khamiista, Oktoobar 29, 2020 Douglas Karr
Baahida loo qabo horumarinta WordPress ayaa sii socota oo sii kordheysa iyadoo ku dhowaad dhammaan macaamiisheenna ay hadda haystaan ​​ama ay leeyihiin bog WordPress ah ama ay ku jiraan galka WordPress. Waa tallaabo adag - oo uusan jeclayn qof walba laakiin waxaa jira mowduucyo aad u tiro badan, waxyaabo dheeri ah, iyo tiro badan oo horumariyayaal ah oo macno samaynaya. Awoodda aad wax uga beddeli karto joogitaanka websaydhka adiga oo aan xoqin madal oo aad bilowdo waa faa'iido weyn.
Haddii aad waligaa leedahay degel WordPress aad neceb tahay, ama si fudud uma heli kartid inuu u shaqeeyo sida aad jeceshahay - kaliya raadso ilo kuu hagaajin kara adiga. Hirgelinta WordPress waxay kaliya ufiicantahay sida dadka soosaaray mawduucaaga iyo waxyaabahaaga.
Waxaan soo marnay baahi aad u weyn oo ah inaan u weecano adeegyada iyo qandaraasleyaasha qandaraaska u beddelaya feylasha sawir-qaadista oo u beddelaya mowduucyo, ama waxaan ka soo iibsannaa mawduucyada adeegyada dhinac saddexaad. Waxaan runtii ugu jecelahay Themeforest tayadiisa iyo xulitaankeeda (taasi waa iskuxiraheena xiriirka). Qeybta ugu hooseysa, waa inaadan waligaa wax ka bedelin faylasha mawduuca mooyee hadaad wax culus u qabanaysid moowduuca mooyee. Dhammaan waxyaabaha ku jira - bogagga, dhejiska, iyo qaybaha, waa inay noqdaan kuwo wax laga beddeli karo iyada oo loo marayo maamulka mawduucaaga.
Markaan leenahay mawduuc horumaray ama aan mid iibsanno, in kastoo, badanaa waxaan helnaa arimahan guud:
Qeybaha halkii Noocyada Boostada ee Gaarka ah - Mararka qaarkood bogaggu waxay leeyihiin qaybo kala duwan - sida Wararka, War-Saxaafadeedyada, Liisaska Wax-soo-saarka, iwm kuwaas oo si fiican ugu shaqeeya qaabka qaabka blog-ka oo aad ku leedahay bogga tusmada, bogagga qaybta ka dibna bogagga keli ah si loo muujiyo waxa ku jira oo dhammaystiran. Si kastaba ha noqotee, waxaan ogaaneynaa in horumariyayaal mawduucyo badani ay jaraan qaybaha horumarinta iyo hardcode sidaa darteed waxaad u isticmaali kartaa oo kaliya baloogga si aad ugu dhajiso waxyaabahaan. Tani waa hirgelin xun oo kama faa'iideysaneyso Noocyada Boostada Gaarka ah ee WordPress. Sidoo kale, haddii aad dib u habeyn ku sameyso qaybahaaga - waa lagaa xannibay maxaa yeelay mawduuca sida caadiga ah waa mid adag. Waxaan badanaa tagnaa, horumarinaa noocyada boostada ee caadiga ah, ka dib waxaan u adeegsanaa fiilo si aan ugu beddelno qaybta qoraallada nooca boostada caadiga ah.
Meelaha Gaarka ah iyada oo aan la Siinin Qalabka Gawaarida Gaarka ah - Runtii waan layaabay in Goobaha Hormarinta ee Gaarka ah aysan iibsan WordPress oo lagu daro sheyga muhiimka ah. Haddii aad hayso qoraallo u baahan macluumaad dheeri ah - sida fiidiyow, cinwaan, khariidad, iframe, ama faahfaahin kale, ACF waxay kuu oggolaaneysaa inaad barnaamij ka dhigto soo gelitaanka walxahaas si firfircoon mawduucaaga oo aad uga dhigto mid loo baahan yahay, la beddeli karo, ama ikhtiyaari ah . ACF waa wax waajib ah in la isticmaalo waana in loo adeegsadaa halkii ay ka ahaan lahayd Goobaha Khaaska ah sababtoo ah xakamaynta ay ku bixiso mawduucaaga. Ma dooneysaa fiidiyo ku dhex jirta bogga guriga? Ku dar goob khaas ah oo kaliya ku soo bandhigeysa sanduuqa meta ee tifaftiraha boggaaga guriga.
Qaab dhismeedka Mawduuca - WordPress wuxuu leeyahay tifaftire mawduuc aasaasi ah oo ay tahay inaan isticmaalno waqtiyada aysan macaamiisha na siinin FTP / SFTP helitaanka feylka. Ma jiraan wax aad u jahwareersan sida iibsashada mawduuc oo aan lahayn hab lagu saxo qaababka, cinwaanka, ama lugta maxaa yeelay waxay u wareejiyeen faylasha faylalka hoose. Faylasha uga tag xididka galka mawduuca! Ilaa aad ku darto qaab kale, maahan baahi loo qabo dhammaan qaababka isku dhafan ee galka. Maahan inaad boqolaal faylal ah ku yeelan doontid galka mawduuca oo aadan heli karin.
Dhinacyada iyo Widgets - La'aanta shabaqa si loogu daro wijiyadaha mawduucaaga oo dhan ayaa ah wax laga xumaado… ka dibna aad u isticmaalidda dhinacba dhinac iyo widget-yada wixii habboon in ay noqdaan xulashooyinka fudud sidoo kale waa wax laga xumaado Dhinac waa in lagu xaddido waxa ku jira mawduucyada qaar bogagga mawduucyada qaarkood laakiin si joogto ah ayaa loo cusbooneysiiyaa. Waxay noqon kartaa Wicitaan-ku-Waxqabasho dhinaca mawduucaaga ah. Ama waxay noqon kartaa xayeysiin aad jeceshahay inaad soo bandhigto ka dib waxyaabaha ku jira. Laakiin maahan dhinac iyo widget kaliya in la muujiyo lambar taleefan, tusaale ahaan.
Ikhtiyaarrada koodhadhka adag - Xiriirinta bulshada, sawirrada, fiidiyowyada, iyo cunsur kasta oo kale waa in lagu dhisaa ikhtiyaarrada mawduucyada ee si fudud loogu beddelan karo. Ma jiraan wax aad u sii xumeynaya sida inaad u gudubto feylasha mawduuca aasaasiga ah si aad ugu darto xiriiriyaha astaanta bulshada ee 10 goobo kala duwan. Kudar bog ikhtiyaar ah (ACF waxay leedahay kudar) iskuna dhig dhamaan dejimaha halkaas si dadka suuqgeynaya ay si sahal ah ugudarsadaan ama iskaga badalan karaan markii mawduuca kor loo qaadayo lana socdo.
Liisaska Xiriirinta waa Liisaska - WordPress waxay lahaan jirtay qayb xiriiriyeyaal ah aakhirkiina waa laga takhalusay maxaa yeelay menusyadu waxay ahaayeen dariiq dhammaystiran oo lagu hirgeliyo liistada xiriidhada ilaha gudaha ama dibadda. Waxaan badanaaba aragnaa hal menu oo loogu talagalay meelo badan oo goobta ah, ama waxaan aragnaa liisas lagu soo bandhigay widget sidebar. Haddii liistadu tahay goob joogto ah oo jiif ah, taagan, ama kala sarreysa ah… waa waqtigii menu-ka.
Index iyo bogga hore - Bogga tixraaca waa in loo hayaa bartaada oo lagu qoro qoraalada aad soo saareyso. Haddii aad jeceshahay inaad yeelato bog guri oo kuu gaar ah oo aan ahayn qoraalada barta, waa inaad ku dartaa a Faylka shaashadda Bogga Hore mawduucaaga. Nidaamyada Maamulka> Akhrinta ee ku dhex jira WordPress ayaa kuu oggolaanaya inaad dejiso bogga aad rabto inaad yeelato sida boggaaga hore iyo bogga aad rabto inaad yeelato sida boggaaga blog u adeegso!
Tixgelinta - Mawduuc waliba waa inuu noqdaa ka jawaabaya dhererka iyo ballacyada kala duwan ee tirada guud ee muuqaalka garoonka dadku waxay adeegsanayaan aaladaha moobaylka, kiniiniyada, laptop-yada, iyo bandhigyo waaweyn. Haddii mawduucaagu uusan jawaab ka bixin, waxaad isku dhaawaceysaa adiga oo aanad siinin khibradda ku habboon qalabka la isticmaalay. Xitaa waxaad xitaa dhaawici kartaa naftaada adigoon u helin taraafikada raadinta moobiilka bartaada.
Dhaqan kale oo weyn oo aan bilaabayno inaan aragno ayaa ah soosaarayaasha mawduucyada iyo iibiyeyaasha mawduuca oo ay ku jiraan feylka soo dejinta WordPress si aad uga heli karto goobta shaqadu sida saxda ah ee ay u muuqato markii aad iibsaneysay - ka dibna waad iska dhex geli kartaa oo aad wax ka beddeli kartaa waxa ku jira . Iibsashada iyo rakibida mawduuc - ka dibna horay u eegista bog maran oo aan lahayn walxaha waaweyn iyo astaamaha ay muujiyeen naqshadda mawduucu inay sii xumaynayso. Qalooca waxbarashadu wuu ku kala duwan yahay mawduucyada murugsan oo horumariyayaashu badanaa waxay u hirgeliyaan astaamo si ka duwan sidii hore. Dukumiintiyada weyn iyo waxyaabaha bilowga ah ayaa ah hab fiican oo looga caawiyo macaamiishaada inay baxaan.
Tags: hababka ugu wanaagsanqaybahabeeraha caadadiiNoocyada boostada caadiga ahhorumarinta mawduucakhaladaadka mawduucatheme word
Vero: Email otomaatiga iyo dib u iibinta
Jun 29, 2014 saacadu markay ahayd 10:55 AM
Qoraal kale oo weyn Doug! Waad ku mahadsantahay wadaagida, waxaan uhelay aqris wanaagsan! ..